DEG DEG: Dowlada Somalia oo ka jawaabtay qodobadii ka soo baxay Midowga Afrika | Salaan Media
DEG DEG: Dowlada Somalia oo ka jawaabtay qodobadii ka soo baxay Midowga Afrika
April 24, 2021 | Published by: Hamse
DEG DEG: Dowlada Somalia oo ka jawaabtay qodobadii ka soo baxay Midowga Afrika.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan seyrtay inta badan go’aanadii kasoo baxay Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika ee la xiriiray khilaafka doorashada Soomaaliya iyo muddo kororsiga.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe oo Muqdisho ku qabtay shir jaraa’id ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan qaar ka mid ah qodobadii kasoo baxaya Midowga Afrika, balse ay diidan yihiin laba qodob oo kale.
“Waxaan soo dhoweynaynaa qodobka la xiriira in ergey gaar ah uu Midowga Afrika u soo magacaabo Soomaaliya, si uu dhex-dhexaadiyo dhinacyada Soomaalida, taasoo aheyd soo-jeedin ka timid madaxweyne Farmaajo” ayuu yiri Farmaajo.
Labada qodob ay DF diidan tahay ayuu sheegay iney kala yihiin qodobka cambaareyntii uu Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika uu u jeediyey muddo kororsigii uu golaha shacabka u sameeyey hay’adaha dowladda iyo qodobka labaad oo ah in ciidamada AMISOM ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda.
“Ma jiro urur cambaarayn kara go’aanka Baarlamaanka. Mana soo dhoweynayno arrintaas, sidoo kale qodobka ku saabsan ciidamada ee Midowga Afrika waxaan u aragnaa mid ciidanka niyad jebinaya, Amisom xaq uma laha in ay dabagal ku samayso ciidamada Qaranka”ayuu yiri wasiirka oo ku gacan seyray dalabkii Midowga afrika iyo beesha caalamka ee ahaa iney ku laabtaan wadahadalkii teendhada Afisiyooni.
Wasiirka oo galabta shir jaraaid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa mar kale dowladaha Kenya iyo Jabuuti ku eedeeyey iney fara gelin ku hayaan arrimaha Somalia.
“Warqadda Midowg Afrika kasoo baxday waxa soo qortay Kenya iyo Jabuuti. Waana qaadacnay. Kaliya Qodobka Ergeyga Midowga Afrika inoo soo direeyso waan soo dhoweyneeynaa, Kenya lama yaabanin oo waa ogeyn waxa ay tahay balse Jabuuti baanu la yaabannahay. Mana ka fileyn inay ka dambeeyso warqada la soo saaray iyaga iyo Kenya”” ayuu yiri Wasiirka.
Jabuuti waa ay beenisay eedda ka timid Wasiirka Warfaafinta. Wasiirka Dhaqaalaha iyo Maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa sheegay inaysan Jabuuti u qalmin hadalka kasoo baxay Soomaaliya.